ယခုသင် MIUI 32 wallpapers ကိုသင်၏ Android သို့ကူးယူနိုင်သည် Androidsis
Xiaomi သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောတရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်) အထူးသဖြင့်၎င်းင်း၏ဆိပ်ကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အရာအတွက်သာမက Android operating system ကိုပိုမိုအသုံးမပြုရန်ကန့်သတ်မထားသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
Xiaomi မှ စ၍ သူတို့၏ဆိပ်ကမ်းများ၌ပင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလိုချင်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် MIUI ကိုဖန်တီးခဲ့သည်အလွန်ကြီးကျယ်သောအလှအပကိုတစ် ဦး ချင်းအလွှာသည် Android နှင့်တူညီသောနှုန်းဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ MIUI 8 သည် Android 6.0 Marshmallow ကိုထိတွေ့ရန်ရောက်ရှိလာပြီးသင်၏စမတ်ဖုန်းထဲသို့သင်ယခု download လုပ်နိုင်သည့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော wallpapers များပါ ၀ င်သည်။
သင့်စမတ်ဖုန်း၏အသွင်အပြင်ကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်မည့်နောက်ခံပုံ ၃၂ ခု
MIUI သည်၎င်း၏မှတဆင့်မျှဝေခဲ့သည် တရားဝင်ဘလော့ဂ် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရွေးချယ်ထားသည့် wallpapers များစုဆောင်းထားသောဤ MIUI ဗားရှင်းကိုသင်တပ်ဆင်။ ရနိုင်မည်။ စုစုပေါင်းပါ၊ ၂၉ သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နောက်ခံပုံနှင့်အခြား desktop desktop သုံးခုo.
ထိုသူအပေါင်းတို့ထဲမှာချုံ့နေကြသည် ZIP ဖိုင်တစ်ခု သူတို့မျှဝေခဲ့ကြလို့ပဲ resolution အပြည့်အစုံမှာ 2880 x 2560 megapixel ဖြစ်သည်s.
သင်သာမန်နောက်ခံပုံများကိုငြီးငွေ့ပြီးသင်ပြောင်းလဲလိုပါက၊ သို့မဟုတ်သင် MIUI ၏သွင်ပြင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသော်လည်း Xiaomi မှစမတ်ဖုန်းမရှိပါကယခုသင်အားသာချက်ယူပြီးသင်၌သင်ရှာဖွေနိုင်သောကြီးမားသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှစ်မျိုး၏နောက်ခံပုံများ။ အခြားတဖက်တွင်မူ, စိတ္တဇ, gradients, ပြားချပ်ချပ်အရောင်များနှင့်ရိုးရှင်းသောစတိုင်နှင့်အတူ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်ခံပုံများ ရှုခင်းတကယ်ကိုအံ့မခန်း
စကားမစပ်, သင်၏ terminal သည် Android မဟုတ်ပါက၎င်း wallpapers များကို download နှင့် install လုပ်နိုင်သည်။ download စာမျက်နှာတွင်ယခင် MIUI မူကွဲများ၏နောက်ခံပုံများကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ လာပါ၊ သင့်ကိုဖြည့်ရန်ရန်ပုံငွေများရှိသည်။
သင် MIUI 8 နောက်ခံပုံများကိုလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ယခုသင် MIUI 32 wallpapers ကိုသင်၏ Android တွင် download လုပ်နိုင်သည်